Nezvedu - Foshan Guta Nanhai Yingjiwei Aluminium Zvivakwa Zvekuvakisa Co., Ltd.
Foshan Guta Nanhai Yingjiwei Aluminium Zvekuvakisa Zvishandiso Co., Ltd yakavambwa muna 2009, iri muLishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, anenge 20KM kubva kuGuangzhou Baiyun International Airport. Fekitori yedu inovhara nharaunda inopfuura 80,000 mativi emamirimita, ayo pane asiri pasi pevashandi mazana maviri uye makumi matatu vane ruzivo vagadziri. Isu takanangana nekugadzira aluminium veneer mapaneru, aruminiyamu zinga remahombekombe uye masiringi ealuminium nemhando dzakasiyana dzekurapwa kwepamusoro senge: PVDF / Fluorocarbon kupfeka, kuputira hupfu, machena nehuni hwehuni hwehuni, anodized uye kupenda kweUV zvichingodaro. Hupfu hwedu hunowanzorayirwa kubva kune imwe nyika inozivikanwa yeAkzo Nobel kambani, iyo yaizoona kuti mhando yekupfeka yezvigadzirwa zvedu iri yepamusoro uye yakasimba.
Pane 3 seti ye slotting muchina, 14 seti yekukomberedza michina, 8 seti yemachina ekubaya, seti gumi nemaviri emashini ekuveza, 3 seti yemashini ekudhinda eUV uye 2 seti yemuchina wekucheka laser mumusangano uye yedu yepamusoro poda yekupenda tambo yakaunzwa kubva kuJapan. Iyo yegore inobuda yealuminium veneer ingangoita mamirioni 2.3 emamirimita.
Zvigadzirwa zvedu zvinonakidzwa nemazita akanaka uye anoshandiswa zvakanyanya mukati mekunze nekune dzimwe nyika, akakodzera hotera, chipatara, chivakwa chekugara, villa, chiteshi chechitima, chiteshi chechitima, zvitoro, chivakwa chehofisi uye skyscraper nezvimwe. Iwo mapurojekiti atakapa anosanganisira: Guangzhou Baiyun Airport; Zhengzhou Olimpiki Gymnasium; Canton Fair Exhibition Hall, Bhizinesi Rekutengesa reEthiopia neNational Court yeSingapore ...
Nomwoyo wose kugamuchira shamwari dzedu uye vatengi kubva pasi pose kushanyira fekitari yedu. Tichaita zvese zvatinogona kuti tikupe iwe yakanyanya kunaka yealuminium veneer solution service. Iko kune Yingjiwei, pane nzira.